कसरी. edu backlinks तपाईंको साइट मा असर गर्न सक्छ SEO?
Edu backlinks लाई बहुमूल्य रूपमा मानिन्छ रूपमा तिनीहरू विश्वसनीय र सम्मानित डोमेनबाट आउँछन्. तिनीहरू प्राय: कलेजहरू, विश्वविद्यालयहरू, उच्च विद्यालयहरू, र अन्य शैक्षिक संस्थानहरूद्वारा प्रयोग गरिन्छ. तिनीहरूले प्रयोगकर्ताहरूलाई मूल्य ल्याउनको रूपमा, Google ले उनीहरूलाई उच्च सराहना गर्दछ र SERP मा उच्च श्रेणी निर्धारण गर्छन्.
यो धेरै वेबसाइटहरू र लिङ्कहरूमा पहुँच प्राप्त गर्न प्रयासहरू धेरै समय लाग्छ. तथापि, फायदा यो हो कि तपाइँ स्पष्ट रूपमा एक विशेष शैक्षिक क्षेत्र मा एक विशेषज्ञ हुनु पर्छ यो देखि तपाईंको साइट मा एक backlink प्राप्त गर्न को लागि.
यदि तपाईं गुणवत्ता प्राप्त गर्न संघर्ष गर्दै हुनुहुन्छ. edu backlinks तपाईंको साइटमा, यो पोस्ट तपाईंको लागि मूल्यवान हुनेछ किनकि म यहाँ सबै भन्दा बढि व्यापारिक लिङ्क निर्माण प्रविधिहरू भेला हुन्छन्.
को लाभ. edu backlinks
Google ले सबै edu को सराहना गर्दछ. डोमेनहरू र त्यसपछि तपाइँले यस साइटलाई उच्च वर्गीकरणको रूपमा आकर्षित गर्नुहुनेछ यदि तपाइँ यी डोमेनहरूबाट बाह्य लिङ्कहरू पाउनुहुन्छ;
सबै शैक्षणिक वेब स्रोतहरू उच्च-गुणस्तरका हुन् र प्रयोगकर्ताहरूलाई मान्य मान्छन्;
आफ्नो लिंक राख्नु. edu डोमेन, तपाईले धेरै लक्षित ट्राफिक पाउनुहुनेछ जुन रूपान्तरण गर्न सजिलो हुनेछ;
लाभ वेबसाइट को मूल्य र सत्य.
कसरि गुणवत्ता को निर्माण. edu backlinks?
विश्वविद्यालयहरू र उच्च विद्यालयहरूसँग राम्रो सम्बन्ध स्थापित गर्न, तपाईं आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई अनुदान र छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ।.
तपाई शैक्षिक संस्थाहरूको वेब खोज सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्छ Google वा अन्य स्थानीय च्यानलहरू जुन तपाइँले तपाइँको क्वेरीमा प्रासंगिक जानकारी प्रदान गर्न सक्नुहुनेछ. निश्चित गर्नुहोस्, तपाइँले छनौट गर्ने एक शैक्षिक संस्थामा धेरै दर्शकहरू छन् वा सोध्छन् कि विश्वविद्यालय वा स्कूलमा समुदाय छ. यी समुदायहरूको लागि चार्ज गर्ने व्यक्तिहरूलाई पुग्नुहोस्. तपाईंको उद्योग वा खुदरा उत्पादनको आधारमा तपाईले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ. एडु स्रोतहरू ब्याकलिङ्कका लागि फर्किनेछन्. उदाहरणका लागि, यदि तपाईं खुदरा खेलकुद उपकरणहरू गर्नुहुन्छ भने, तपाइँ खेलकुदहरूमा एक्सेल विद्यार्थीहरूलाई छात्रवृत्ति प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ. यदि तपाईं एक ह्यान्डल ब्याकलिङ्क प्राप्त गर्न सक्षम हुनुहुन्छ. edu वेब स्रोत जुन तपाईंको बजार आलासँग कम से कम अपेक्षाकृत प्रासंगिक छ, त्यसपछि तपाइँ आफ्नो ब्याकलिङ्क प्रोफाइलमा थप मान थप्न सक्नुहुन्छ.
विद्यार्थीहरूको लागि छुटहरू प्रदान गर्नुहोस्
यदि तपाईंले केहि उत्पादनहरू खुदरा गर्नुहुन्छ जुन विद्यार्थीहरूको दैनिक दैनिक आवश्यकताहरूको लागि उपयोगी हुन सक्नुहुनेछ, त्यसपछि तपाइँ छूटहरूको बदमामा ब्याकलिङ्कहरू प्राप्त गर्न प्रयास गर्न सक्नुहुन्छ।. विद्यार्थीहरू अनूठा प्रस्तावहरू र उपहारहरू प्रदान गर्नुहोस्. तपाईंका उत्पादनहरू स्थिर वा सफ्टवेयर डिजाइन हुनसक्छन् जसले विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको पाठ्यक्रम पछ्याउन मद्दत पुर्याउन सक्छ. तपाईंले संस्थाको वेबसाइटमा तपाइँको प्रस्ताव प्रकाशित गर्न विश्वविद्यालयको डनलाई सोध्न आवश्यक छ.
एक सामग्री सिर्जना गर्नुहोस् जुन विद्यार्थीहरूमा रुचि हुनेछ
तपाईले गुणस्तर ब्याकलिङ्कहरू पाउनुहुनेछ, विशेष गरी बाट. edu साइटहरु, यदि तपाईंको वेबसाइट को सामग्री को पाठकों को लागि कुनै पनि मूल्य छ. कसैलाई निश्चित गर्न क्रेप सामग्रीहरू पढ्न चाहँदैनन्.
धेरै शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थीहरूको लागि ब्ल्याकहरू राख्छन्. तपाईं यस ब्लगमा तपाईंको सान्दर्भिक र अनुसन्धान आधारित लेख प्रकाशित गर्न वा विद्यार्थीको प्रश्नहरूको बुद्धिमान जवाफहरू पोस्ट गर्न सक्नुहुन्छ Source .